7 qodob – talada Dr. Cabdinaasir Cabdulle | KEYDMEDIA ENGLISH
7 qodob – talada Dr. Cabdinaasir Cabdulle
Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed, oo ka mid ah musharixiinta u taagan qabashada xilka ugu sarreeya dalka, ayaa ka hadlay halka ay mareyso xaaladda dalka, wuxuu soo jeediyay ku dhaqaaqidda todobo qodob si looga baxo jahawareerka jira.
MUQDISHO, Soomaaliya - Farriinta kasoo baxday Hay’adda Sirdoonka Qaranka ee NISA waa mid xasaarad abuur, argagixin, amni-darro, sumcad xumo iyo kala shaki ka dhex abuuraysa xafiisyada Madaxda Qaranka ee Dalka ugu sarreysa. Umadda Soomaaliyeed oo la tacaalaysa colaado iyo abaaro baahsan maanta uma baahna welwel horleh. Ma ahan wax la aqbali karo in la abuuro xasillooni-darro amni iyadoo ay hore u jirtay xasillooni-darro siyaasadeed.
Waxaan ognahay in Xildhibaannada Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka ee la doortay ay si xowli ah ku socoto shahaado-siintooda iyo aqoonsi usamayntoodaba. Tallabadaan nidaamka baalmarsan ay ku dhaqaaqday Hay’adda NISA waxay u muuqataa in loogu talogalay cabsi-gelinta Xildhibaannada cusub iyo dib-u-dhac ku yimaadda hannaanka Doorashada iyo qorshaha dhaarinta Xildhibaannada cusub.
Haddaba, iyadoo ay jirto caqabadaha aan kor kusoo xusnay, waxaan ku baaqaynaa:
1. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta inuu dardargeliyo dadaalada uu ku xaqiijinayo dhammaystirka hannaanka doorashada iyo amniga, sugidda ammaanka Xildhibaannada cusub iyo guud ahaan amniga caasimadda Muqdisho.
2. Ra’iisul Wasaarahu, isagoo kaashanaya Dowlad-goboleedyadda, Golaha Midowga Musharaxiinta iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada, inuu xoojiyo dadaallada uu isugu soo dhoweynayo dhinacyadda ku kala aragti duwan hannaanka Doorashada.
3. In la muujiyo midnimo iyo dulqaad, si loo dhammaystiro doorashooyinka socda, dalkana looga saaro hubsiimo la’aanta dhalisay xasillooni-darada siyaasadeed iyo khalkhalgelinta nabadgelyada.
4. In la tixgaliyo baaqyadda isdaba-joogga ah ee kasoo baxaya Saaxiibadda Caalamiga ah ee Dalka Soomaaliya ee la xiriira arrimaha Doorashooyinka.
5. In hore loo sii wado shahaado-siinta iyo qorshaha dhaarinta Xildhibaannada cusub, lana dardargeliyo qabsoomidda fadhiyada ugu horreeya iyo doorashada Guddoonka cusub, si loo xaqiijiyo jiritaanka Hay’adaha Dastuuriga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
6. In Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ay markasta ka fogaadaan ku-dhex milanka arrimaha siyaasadda ee Dalka, ayna ka shaqeeyaan kahortagga shirqoollada iyo weerarada cadowga Argagaxisadu ku hayaan Ummadda Soomaaliyeed.
7. In garabyadda siyaasadda ee isdiidan ay ka fogaadaan tallaabo kasta oo dhaawici karta ama wiiqi karta midnimada iyo amniga dadka iyo dalka.
Ugu dambeyntii, iyadoo lagu jiro Bisha Barakaysan ee Ramadaan, waxaan Ilaahay ka baryeynaa inuu naga aqbalo cibaadada iyo camalka suubban, in Doorashooyinka iyo marxaladda kala-guurka ee Soomaaliya noogu dhammaato jawi nabadeed iyo in loo gargaaro dadkii ay saameeyeen colaadaha, abaaraha iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee dalka ka dhacay.
Dr. Abdinasir Abdille Mohamed – KEYDMEDIA ONLINE